Venezuela u tag Colombia - Akhristadayda - Geofumadas
Venezuela u tag Colombia - My odyssey
Disember, 2018 Leisure / waxyi
Weligaa ma dareentay jirka inaad naftaada dareento? Waxaan dareemay dhawaanahan. Dhaqanku wuxuu noqonayaa halbeeg isdabajoog ah oo kaliya waxaad dareemeysaa in uu ku nool yahay sababtoo ah wuxuu neefsanayaa. Waan ogahay in ay tahay in ay adag tahay in la fahmo, iyo xitaa markaa ka hor inta aan ka fekerayay inaan ku faani karo sida qof fiican, oo buuxa nabada ruuxiga ah iyo dareenka. Laakiin marka astaamahaas oo idil ay baabi'iyaan, waxaad dareemeysaa inaad dareento wax aan dhaawac ahayn ama aad daryeesho.
Out of ideological, siyaasad ama xuduudaha, kaliya si ay uga jawaabaan codsiga Golgi, waxaan tirinayaa tan. Qof kastaa wuu tarjumi karaa waxa warbaahintu sheegayso, gaar ahaan heer caalami ah. Halkaan, waxaan kugula dardaarmay inaadan ka tagay Venezuela ee Colombia.
Maaddaama ay dhammaanba igu ahaayeen Venezuela, ka hor dhibaatadan.
Nabadgaygu wuu dhammaaday markii wax waliba ay isbedeleen Venezuela, inkasta oo aanan go'aansan karin goortii uu burburay, iyada oo duulimaadkii dhibaatooyinka aan marnaba malaynayn inay dhici doonto. Ma aqaano sida ay u socotay maskaxdayda sida maskaxda, go'aanka ah inuu ka tago dalkayga iyo qoyskeyga; waxa, illaa maanta qorraxda, waxa ay ahayd tan ugu adkaanta ee aan ku noolaa.
Waan kuu sheegi doonaa sida safarkaygu ahaa inaan uga tago Venezuela, laakiin marka hore, waxaan ku bilaabi doonaa anigoo sharraxaya sida aan ugu noolaa waddankeyga. Waxay ahayd sidii waddan kasta oo caadi ah; Waxaad dareemi kartaa inaad xor u tahay inaad wax sameyso, kasbato rootigaaga shaqada adag, noloshaada dhulkaaga iyo meelahaaga. Waxaa lagu soo koray iyadoo lagu saleynayo qoys mideysan, halkaasoo xitaa asxaabtaadu ay yihiin walaalo oo aad fahamsan tahay in xiriika saaxiibtinimo inuu xiriir dhow la leeyahay xiriir dhiig.
Aniga ayaa u ahaa kii ku amray, waxay ahayd tiirkii reerka, maxaa yeelay waa inaynu dhamaanteen noqonno dad wax soo saar leh, sida ay ku echaos pa lante. Afartan adeerkaygu waa ilo aan ku jeclahay, iyo walaalahayga walaalaha ah -kuwaas oo ah walaalo badan oo walaalo ah- iyo hooyaday, sababta aan ku noolahay. Waxaan soo toosay anigoo mahadsan maalin walba si aan uga mid noqdo qoyskaas. Go'aanka ah inaan ka tago, maankayga ayaa ku soo dhacay, ma ahan oo keliya baahida loo qabo in horumar la sameeyo, laakiin sidoo kale mustaqbalka wiilkayga. Venezuela, in kasta oo dhabarkeygu uu maalinba maalinta ka dambaysay dhacayay oo kun kun waxyaabood in aan ka fiicanahay, wax walba way ka sii xumaadeen sidii hore, waxaan dareemay in aan ku jiray tartan Survivor, halkaas oo ay ku noolyihiin uun nool, xadgudbaha iyo bachaquero.
Go'aanka ka baxaya Venezuela
Waxaan fahamsanahay dharbaaxada ka jira Venezuela, fursadaha inaysan jirin, xitaa kuwa ugu aasaasiga ah waxay leeyihiin cillado: adeeg la'aan koronto, biyo la cabbo, gaadiid iyo cunno. Dhibaatadu waxay gaartay luminta qiyamka dadka, waxaad arki kartaa dad nool oo ka fekeraya sidii loo waxyeelleeyn lahaa dadka kale. Mararka qaar, waxaan fadhiyi lahaa si aan uga fikiro haddii waxaas oo dhami ay yihiin sababtoo ah in Ilaah naga tegey.
Waxaan bilo ka hor qorsheynayay safarka madaxayga, wax yar kadib waxaan awoodey inaan ku kiciyo qiyaastii 200 dollars. Cidna ma ogaan, lamana fileynin inay iyaga la yaab ku siin doonaan. Laba maalmood ka hor intaanan tegin, hooyaday ayaan u wacay oo waxaan u sheegay inaan aadi doono Peru qaar ka mid ah asxaabta (asxaabta), iyo inaan maalintaas istaagi doono tikidhada baska ee imaan doona joogitaankeyga koowaad, Kolombiya.
Halka jirdilku ka billowday, sida dad badani u ogaan doonaan, waxba kama shaqeeyaan sida dalalka kale, Suuragal ma ahan inaad iibsato tikit ama tikidhada safarka waqti kasta oo aad rabto. Laba maalmood ayaan ku seexday garoonka diyaaradaha, anigoo sugaya mid ka mid ah basaska inuu imaado, maadaama diyaaradda ay haysatay laba gaari oo keliya sabab la xiriirta la'aanta qaybo ka mid ah firaaqada. Mulkiileyaasha khadka ayaa soo gudbiyay liis kasta oo saacad walba ah oo ah 4 si dadku ay u sugaan booska, weedhahooda:
"Kii aan halkan joogin marka uu ka soo wareego liistada lumiso kursigiisa"
Ka bixitaanka Venezuela
Waxay ahayd mid cajiib ah in ay ku jirto bada dadka oo doonayay in ay qaataan waddo isku mid ah aniga, ragga, haweenka iyo carruurta ee joogtaas; taas oo aan hubo inaan wax ka sheego, waxay ahayd mid aad u xun, waxay dhadhanaysay wax xun, dadkii badnaana waxay ku abuurtay inaad dareento xummad.
Waxaan sugayay labadeyda labadii maalmood ee igu dambaysay, taasoo ka dhigeysa in lineashadayda ay awood u leedahay inay iibsato tikidhka. Anigu ma bilaabin oo dareenkeyga ah ee khiyaaliga ah ee ina keenay dhibaatada ayaa keenay maskaxdayda inaan iska daayo, laakiin ma aanan qaban. Waxay iga caawisay in aan saaxiibo aniga igu xiga, anaguna dhammaanteen waan nagu taageeray si aan u dareemo wanaag; inta u dhaxaysa kaftan iyo wicitaanada qaraabadeyda. Kadib waxay ahayd waqtigii ugu dambeyntii baska loo raaco San Cristóbal - Gobolka Táchira. Qiimaha tigidhka ahaa 1.000.000 ee Bolívares Fuertes, ku dhawaad ​​70% mushaarka ugu yar waqtigaas.
Waxay ku qaataan saacado fadhiya baska, wax fiican ayaa ah in ugu yaraan aan wifi ku xidhnaado, waxaan arkay qaybo badan oo ka mid ah aljabalas ee ilaaliyaha qaranka, iyo darawalku meel aad u gaaban, halkaas oo uu lacag siiyay. Markii aan tagay San Cristóbal, waxay ahayd horaantii 8, waxaan lahaa inaan helo gaadiid kale si aan u helo Cúcuta. Waxaan sugay oo sugay, ma jirin gaadiidka, waxaan aragney dadka ku socda lugta, hase yeeshee, ma aanan helin wax fursado ah oo aan go'aansanay inaan halkaa sii joogno. Gawaarida waxay qaadatay laba cisho, dhammaantood waxay seexanayeen hal dhinac, illaa inta aan qaadan karno taksi wadajir ah, mid waliba wuxuu bixiyay 100.000 Bolívares Fuertes.
Waxaan bilaabi 8 subax qaybtan si Cucuta ahaa ee ugu khatarta badan, ugu dambeeya ee Ilaalada Qaranka uu lahaa in ay dhex maraan 3 alcabalas CICPC ah, mid kale oo ka mid ah Bilayska Qaranka falal lidi ku ah. Alcabala kasta, waxay naga baareen sidii inoo ahaayeen kuwo aan dambi ahayn; raadinta waxa ay naga qaadi karaan, waxaan haystay wax yar, wax qiimo ah iyo 200 $; in aan ku haysto meel aan la heli karin
Markaad timaaddo, waxay ahayd 10 aroortii, oo waad arki kartaa in dadku ay isugu yeedhaan lataliyayaal. Kuwaas -sida la filayo- Doonay nidaamka isdaba-marinta ee xawaaladda u dhaxaysa 30 iyo 50 $, laakiin ma aanan fiirin cidna, waxaan joojinay buundada si aan u sameysanno safka ugu dambeynna galo Cúcuta. Waxay ahayd illaa maalintii xigtay ee 9 habeenkii oo aan awoodnay inaanu ku dhufano baasaboorka.
Waxaan u sheegay in la shaabadeeyo socdaalka baasaboor Colombia lahaa in ay marinka Ahaado soo socda, iyo sida habeenkii 9 waxay ahaayeen, waxaa jiray sanduuqyada furan si ay u iibsadaan tikidhada aan caga soo socda. Dadku way qayliyeen.
waxay doonayaan inay xirtaan xadka, kuwa aan haysan tigidhka waa inay halkan joogaan, ma awoodaan inay u guuraan dhinaca xakamaynta.
Xaaladdu waxay noqotay mid aad u kacsan oo walwal ah, waxaan arkeynay dadka cabsida leh ee ka soo jeeda goobaha aan rasmiga ahayn, waxayna noo sheegeen:
Waa inay si degdeg ah u go'aansadaan waxa la qabanayo, ka dib markii 10 habeenkii guerrillada milatariga ah ay waydiisanayaan lacag iyo inay wax walba ka qaadaan qof walba.
Mucjisooyin, in aan quusan oo aan garanaynin waxa la sameeyo, la taliye ah oo u soo baxay inuu saaxiib la ahaado meesha aan ku noolaa ee Caracas, aniga iyo saaxiibaday qaaday xafiiska milkiilaha of mid ka mid ah khadadka baska, waxaan la iibiyey marinka kasta muuqday ee 105 $ waxayna na xalliyeen meel bannaan oo la seexdo, ilaa maalinta xigta.
habeenkii si aanan laga yaabaa inuu nasiyo, waxaan qabaa wakhtiyada wakhtigaas oo dhan waxaan ku qaatay i lahaa ee gobolka ka mid ah heegan neerfayaasha, waxaa iman doona subax, aynu ku samaynay oo dabada si uu socdaalka baasaboorka Colombia, iyo ugu dambayntii ay geli karin.
Ma aha qof walba inuu ku faraxsan yahay inuu dhaafo, aniga oo kale. Kuwa ku fikiraya haajiriinta waa inay sameeyaan taxaddar; Socdaalkan waa mid gaaban, laakiin ma fududa in la maro mid ka mid ah xaaladaha aan la kulmay iyo in aan arkay. Waxaa jira waxyaabo aan jeclahay inaan iska iloowo.
Mid ka mid ah dhihi lahaa sida ugu fiican ee dalkooda, sababtoo ah wadaninimo isaga qaaday gudaha jacaylka waayo, dalka halkaas oo aynu ku dhalannay oo dhan, by calanka a ka dhigaya marka aad u aragto maaliyada ee qof weydiisanaya lacagta birta ah ee geeska ah ee Bogota, waad barooran.
Dareenkan waa mid adag, ee doonaya inuu kuugu dhowaado qoyskaaga. Had iyo jeer waxaan ahaa rajo, xitaa dhibaatooyinka; iyo inkasta oo aan qabo iimaan, waxaas oo dhan waxay qaadataa rajo muddada gaaban. Waxa kaliya ee aan lumin waa jacaylka qoyska. Hadda, waxaan rabaa in wiilkaygu mustaqbal wanaagsan helo.
Post Previous«Previous Waayo-aragnimada barashada iyo barista BIM ee ku-xirnaanshaha qiyaasta CAD
Post Next Xaqiiqo muuqda ama mid run ah Taasoo ka fiican in la soo bandhigo mashruuc? Next »